SAWIRRO: Wasiirka waxbarashada XFS oo Garoowe uga qeyb galay Bandhigga hiddaha iyo dhaqanka – Wakaaladda Wararka Hiilnews
SAWIRRO: Wasiirka waxbarashada XFS oo Garoowe uga qeyb galay Bandhigga hiddaha iyo dhaqanka
By Ciise Cabdi Ciise on January 27, 2019 No Comment
Axad, Janaayo-27-2019(HNN) Wasiirka waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Bare ayaa magaaladda Garoowe uga qeyb galay munaasabadda bandhigga Todobaadka Hiddaha, Dhaqanka iyo Aqoonta Jaamacadda Boosaaso, Faraceeda Garowe.
Munaasabadda ayaa waxaa goob joog ka ahaa madax ka tirsan maamulka puntland odayaal dhaqameed iyo marti sharafkale oo lagu casumay.
“Waxaan magaaladda Garoowe uga qeyb galay munaasabadda bandhigga Todobaadka Hiddaha, Dhaqanka iyo Aqoonta Jaamacadda Boosaaso, Faraceeda Garowe”ayuu yiri wasiirka waxbarashada.
” Waxaan si gaar u mahad celinayaa intii ka qeyb qaadatay qabsoomidda munaasabadda bandhigga Todobaadka Hiddaha iyo dhaqanka oo ugu horeyo wasiirka waxbarashada Puntland Abshir, Aw-Yuusuf iyo Nabadoon Ciise Maxamed’ayuu markale yiri wasiir Goodax.
Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Bare ayaa tilmaamay in Wasaaradda waxbarashada ay ka go’antahay soo celinta Hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
SAWIRRO: Wasiirka waxbarashada XFS oo Garoowe uga qeyb galay Bandhigga hiddaha iyo dhaqanka added by Ciise Cabdi Ciise on January 27, 2019